Neurodiagnostic နည်းပညာရှင်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / Neurodiagnostic နည်းပညာရှင်ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန် Template ပြီးတော့တာဝန်တွေကို
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 347 views
Carryout electroneurodiagnostic (အဆုံး) electroencephalograms အပါအဝင်စမ်းသပ်မှု, အလားအလာ evoked, polysomnograms, သို့မဟုတ် electronystagmograms. အာရုံကြော conduction သုတေသနမေလတွင်အားဖြင့်ဖျော်ဖြေကြသည်.
ကော်လျှောက်ထား clients များချိတ်ဆက်ရန်.
ဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်ကြောင်းစနစ်ကပြဿနာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဆရာဝန်များကိုကူညီနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပြန်သုံးသပ်ပါ, သို့မဟုတ်စိတ်ကို, အိပ်.
ဥပမာအား electroencephalography အဘို့စမ်းသပ်သို့မဟုတ်အစီရင်ခံစာများ Perform (EEG), polysomnography (PSG အသင်း), အာရုံကြော-conduction သုတေသန (NCS), electromyography (တွေ့ရစဉ်), နှင့် intraoperative စစ်ဆေးခြင်းကို (IOM).
အချိန်အဆညှိ, လိုအပ်အဖြစ် devices နဲ့တိကျမှန်ကန်အောင်မြင်မှုများ troubleshoot.
ဦးနှောက်အရေးယူနှောက်သေ၏မရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ရန်စစ်ဆေးမှုများ execute, တစ်ဦးမေ့မြောရာမှပြန်လည်နာလန်ထူသည်အနာပျောက်စေသောသို့မဟုတ်တောင်မှဖြစ်နိုင်ခြေ.
အမြင်အာရုံတွက်ချက်, ပင်, သို့မဟုတ် somatosensory အလားအလာ evoked (EPS) စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှတုံ့ပြန်မှုထွက်ရှာရန်.
ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဥပမာမကောင်းတဲ့လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဆက်အသွယ်-သို့မဟုတ်ဝေဒနာသည်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အဖြစ်ဖြေရှင်းချက်မှဆင်းသက်လာအကြံပြုပိုငျး, ဦးခေါင်း၏အပြင်ဘက်တွင်, electroneurodiagnostic အစည်းအဝေးများအပေါ်.
လျှပ်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းနေရာတိုင်းမှာ patientsA ခန္ဓာကိုယ် tag ကိုဒေသများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအကဲဖြတ်ရန်.
စာမေးပွဲသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်နေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီကိုစောင့်ရှောက်မည်, electroencephalograph သုံးပြီး (EEG), အလားအလာ evoked (EP) tools တွေ, သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဂီယာ.
အရပျ၌ထားပါ, နည်းလမ်း, cortical တုံ့ပြန်မှုကိုစမ်းသပ်သည့်အခါ, နောက်ကျောသို့မဟုတ်ရံအာရုံကြောသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းလျှပ်စစ် combo သို့မဟုတ် Montage.
sufferersI ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်အကဲဖြတ် personalize ဖို့လိုအပ်တာပေါ့စုဆောင်း.
နိုင်ငံသားများအတွက် Assist, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျောင်းသားများကို, ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူများကသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောပုဂ္ဂိုလ်များ.
လူနာစမ်းသပ်နည်းစနစ်ထုတ်ဖေါ်, လိုအပ်အဖြစ်မေးမြန်းချက်သို့မဟုတ်နှစျသိမျ့လူနာ addressing.
လေ့လာမှုများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါ, စည်းဝေးကြီးများ, သို့မဟုတ်အထူးအစည်းအဝေးများ.
အခြားအရှေးရှေးတစ်ခုလုံးကိုအာရုံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အခိုင်အမာအဘယ်အရာကို active-နားထောင်ခြင်း-ရန်, ထုတ်လုပ်လျက်ရှိအသေးစိတ်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်ရှိခြင်း, မှန်ကန်သောအဖြစ်မေးမြန်းကိစ္စများ, နှင့်လက်မခံနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအချိန်လေးမှာလမ်းပြနေမဟုတ်.
တစ်ခုချင်းစီကိုလာမည့်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တက်ကြွစွာ-သင်ယူ-နားလည်မှုလတ်ဆတ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရဲ့သက်ရောက်မှုနဲ့.
နည်းလမ်းများ-ရွေးချယ်ခြင်းသင်ယူခြင်းနှင့်ညာဘက်အခွအေနနည်းပြများအတွက် educationPERtutorial မဟာဗျူဟာများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလျှောက်ထားသို့မဟုတ်အသစ်အချက်များသင်ယူရသောအခါ.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏စောင့်ကြည့်ခြင်း-CheckingPERExamining ထိရောက်မှု, အခြားအဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကုစားအရေးယူသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုဖန်တီးရန်.
လူမှုသူတို့ကိုတုံ့ပြန်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလုပ်ပေးအဖြစ် othersI သဘောထားတွေကိုသတိပြုမိအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့် သိ..
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. control-ပြောင်းလဲလုပ်ရပ်များ’ လုပ်ရပ်များ.
ကုမ္ပဏီအရှေ့တိုင်းဆန်-positive ကလူကို enable လုပ်ဖို့ချဉ်းကပ်ရှာဖွေနေ.
ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း-ကိုစူးစမ်းအနုစိတ်ပြဿနာတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆက်စပ်နေသောဒေတာသုတေသနပြု options များ.
ပစ္စည်းကိရိယာရွေးချယ်ရေး-ဖော်ထုတ်ခြင်း tools များနှင့်တာဝန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့မျိုး.
installation-Installing ဝါယာကြိုးများ, စက်, devices များ, features တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် applications များ.
ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်-ထုတ်ဝေရေး coding.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-မြင်လျှင်ကွဲပြားခြားနားသောဆိုင်းဘုတ်များ, နာရီမျက်နှာပြင်, ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသေချာစေရန်စမ်းသပ်မှုထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နေသည်.
tools တွေသို့မဟုတ်နည်းစနစ်၏ function နှင့်ထိန်းချုပ်ရေး-ကိုင်တွယ်မှုလုပျထုံးလုပျနညျး.
ဂီယာအခါဖော်ထုတ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် upkeep ၏မျိုးအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြောင်းကို Maintenance-ပြီးမြောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်.
troubleshooting-ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆက်ကြောင်းနောက်ကွယ်မှအကြောင်းရင်းများကြောင့်မဆိုနှင့် ပတ်သက်. သွားကြဖို့အဘယ်အရာကိုဦးတည်ချက်ကိုရွေးချယ်ခြင်း.
ဆန္ဒရှိသောအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု. ပြင်ဆင်ခြင်း-Restoring စက်တွေသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးအကဲဖြတ်-conduction စာမေးပွဲနှင့်ပစ္စည်းများစာမေးပွဲ, ဖြေရှင်းနည်းများ, အရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်ထိရောက်မှုကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါသို့မဟုတ်နည်းစနစ်.
အများဆုံးသင့်လျော်သောတဦးတည်းကိုရှာဖွေအာဏာရနှင့်အကျိုးအမြတ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများများ၏နှိုင်းယှဉ်စျေးနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း-စဉ်းစား.
analysis-ကိုစူးစမ်း program တစ်ခုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဘယ်လိုအခြေအနေများအတွက်လမ်းအပြောင်းအလဲများ, စစ်ဆင်ရေး, နှင့်လည်း setting ကိုရလဒ်များ impact စေခြင်းငှါ.
ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များ-ဖော်ထုတ်ခြင်းရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေ task ကိုဆည်းပူးဖို့အသုံးလိမ့်မည်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲမှု, ဤဥပဒေကြမ်းများများအတွက်စာရင်းကိုင်.
အစိတ်အပိုင်းများလျော်အသုံးပြုမှုမှပစ္စည်းနည်းလမ်းများ-မြင်နေနှင့်တွေ့ရှိချက်များစီမံခန့်ခွဲမှု, ထူထောင်မှု, နှင့်စက်ကိရိယာများတိကျတဲ့ function ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
အလုပ်သမားအရင်းအမြစ်-အဆောက်အအုံဖှယျ၏ကြီးကြပ်မှု, သူတို့လည်ပတ်နေချိန်တွင်တစ်ဦးချင်းစီကိုညွှန်ပြ, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အဘို့အထိပ်ရှေးရှေးကွဲပြားခြားနားသွား.
Affiliate ရဲ့ဘွဲ့ (သို့မဟုတ်အခြား 2-တစ်နှစ်ဇာတ်စင်)
ထက်ပိုပြီး 1 နှစ်, သလောက်နှင့်နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲအပါအဝင်
AchievementOREnergy – %
အခြားသူများအဘို့စိုးရိမ်ပူပန်မှု – %
ယဉ်ကျေးမှု Direction အဖွဲ့ – %
adapter / ဘက်စုံ A သုံးပြုနိုင် – %
Pingback: Forex Dealer Job Description — Identification Of A Reliable Forex Robot